mairie-antananarivo – Foara eran-tany eto Madagasikara andiany faha 12
auteur 19 may 2017 Commentaires fermés
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny 18 mey 2017 ny « foire Internationale de Madagascar » izay haharitra 4 andro. Andiany faha 12 no tanterahana etsy amin’ny zone FORELLO Tanjombato , ahitana orin’asa 209 mandray anjara, izay misy tranoheva miisa 500. Betsaka ihany koa ireo firenena avy any ivelany nandray anjara toy ny avy any Frantsa, Maurice, Dubai, Indonesia sy ireo firenena maro samihafa, teo koa ny Fikambanana « des Femmes Entrepreneurs de Madagascar» izay samy nahatonga solontena isaky ny faritra ary ny « Point café ».
Nisongadina manokana ny vokatra malagasy satria ny 55,6% ny pavillon dia Malagasy avokoa ary ny 44,4% n’ireo no vahiny. Hita tao avokoa ireo karazan-tsakafo, ny hainoaman-jery an-tsoratra na an-tsary na radio, sy kojakoja tokan-trano, asa- tanana, hotely isan-karazany, orange, banky…..
Ny tanjona ny FIM moa dia ny hifandraisan’ireo firenena eran-tany eo amin’ny sehatry ny vokatra misy ao aminy, ka nahafahany mifanakalo tsena any amin’ny firenena nihaviany fa indrindra indrindra ny fampandrosoana ny orin’asa.
Tonga nanome voninahitra ihany koa ny solontenan’ny Ben’ny Tanàna Lalao RAVALOMANANA, Atoa Julien Andriamorasata sy ireo olo- manan-kaja, toy ny Ministry ny Indostria, Chabani Nourdine sady nisolontena ny filoham-pirenena. Ireo masoivoho vahiny: ny Filohan’ny FMI Patric. D ary ireo filohan’ny « sponsor ofisialy sy exceptionnel » sy ny « groupes des femmes Entrepreneurs ».